Abavelisi be-DWDM abaXhasiweyo | I-China i-Passive DWDM iFektri kunye nabaXhasi
I-HUA-NET ibonelela ngoluhlu olupheleleyo lweemveliso ze-Thermal / Athermal AWG, kubandakanya i-50GHz, 100GHz kunye ne-200GHz Thermal / Athermal AWG. Apha sibonisa inkcazo yohlobo oluqhelekileyo lwe-41-channel 100GHz Gaussian Athermal AWG (41 ijelo leAAWG) icandelo le-MUX / DEMUX elibonelelwe lisetyenziswe kwinkqubo ye-DWDM.
I-AWG ye-Athermal (i-AAWG) inokusebenza ngokulinganayo kwi-AWG esemgangathweni ye-Thermal (TAWG) kodwa ayifuni mandla ombane ukuzinzisa. Zingasetyenziselwa ukutshintshwa ngokuthe ngqo kwiifilitha zeFilin Filter (Uhlobo lwefayile ye-DWDM yemodyuli) yamatyala apho kungekho mandla akhoyo, ikwalungele ukusetyenziswa kwangaphandle kwe-30 ukuya kuma-70 isidanga kuthungelwano lokufikelela. I-HUA-NET's Athermal AWG (AAWG) ibonelela ngokusebenza ngokugqwesileyo okubonakalayo, ukuthembeka okuphezulu, ukusebenziseka lula kokuphathwa kwefayibha kunye nesisombululo sokonga amandla kwiphakheji ehambelana. Ukufakwa okwahlukileyo kunye nemicu yemveliso, enjengee-SM fibers, ii-MM fibers kunye ne-PM fiber zingakhethwa ukuhlangabezana nezicelo ezahlukeneyo. Sinokubonelela ngeephakeji ezahlukeneyo zemveliso, kubandakanya ibhokisi yentsimbi ekhethekileyo kunye ne-19 ”1U rackmount.
Izixhobo ze-DWDM ze-planar (i-Thermal / i-AWG ye-Thermal / ye-Athermal) evela kwi-HUA-NET zikulungele ngokupheleleyo ngokweemfuno zokuqinisekisa ukuthembeka kweTelcordia ye-fiber optic kunye ne-opto-elektroniki. kunye neTelcordia TR-NWT-000468, iZenzo zoQinisekiso lokuQinisekiswa kwezixhobo zeOpto-elektroniki).
Imodyuli ye-100G DWDM (4,8,16 CHANNEL)
HUA-NET Dense wavelength division multiplexer (DWDM) isebenzisa itekhnoloji yokubhabha ifilimu encinci kunye noyilo lobunini be-non-flux metalbonding micro optics yokupakisha ukufezekisa ukongeza okubonakalayo kunye nokulahla kwi-ITUwavelengths. Inika ubude bamaza esiteshi se-ITU, ilahleko esezantsi yokufakwa, ukubekwa bodwa kwesitayile, ibhendi ebanzi yokupasa, ubuntununtunu beqondo lobushushu obuphantsi kunye ne-epoxyfree Optical path. Ingasetyenziselwa ukongeza / ukulahla inkqubo yothungelwano ngomnxeba.
Imodyuli ye-200G DWDM (4, 8, 16 CHANEL)
HUA-NET I-200GHz ye-dense wavelength division multiplexer (DWDM) isebenzisa itekhnoloji yokubhabha ifilimu kunye noyilo lobunini bokungafakwanga kwesinyithi sokubopha isakhelo esincinci se-optics ukufezekisa ukongeza okukhoyo kunye nokulahla kubude be-ITU. Inika i-ITU yesiteshi se-wavevelth, ilahleko esezantsi yokufakwa, ukubekwa bodwa kwesitayile, ibhendi ebanzi yokupasa, ubuntununtunu beqondo lobushushu obuphantsi kunye ne-epoxy free optical path. Ingasetyenziselwa ukongeza / ukulahla kwinethiwekhi yonxibelelwano.
HUA-NET Ubuninzi bezahlulo zobubanzi be-wavelex (DWDM) zisebenzisa itekhnoloji ye-thinfilm yokutyabeka kunye noyilo lobunini be-non-flux yesinyithi sokubopha i-microoptics yokupakisha ukufezekisa ukongeza okubonakalayo kunye nokulahla kubude be-ITU. Ibonelela ngobude be-channel ye-ITU, ukulahleka okuphantsi kokufakwa, ukuhanjiswa okuphezulu, ibhendi yokupasa ebanzi, ubushushu obuphantsi kunye ne-epoxy free opticalpath. Ingasetyenziselwa ukongeza / ukulahla kwinethiwekhi yonxibelelwano.
Umthumeli weXfp, Imodyuli yeFiber Optical, IHuawei Qsfp +, I-Sfp C ++, Ixabiso leHuawei Olt, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle,